ဖားကန့်တွင် ပေ ၂ဝဝ ရှိ ကျောက်ကမ်းပါးယံ ပြိုကျ ရေမဆေးကျောက်ရှာသူ အလောင်း ၁၇ လောင်းတွေ့ရှိခဲ?? - Yangon Media Group
ဖားကန့်တွင် ပေ ၂ဝဝ ရှိ ကျောက်ကမ်းပါးယံ ပြိုကျ ရေမဆေးကျောက်ရှာသူ အလောင်း ၁၇ လောင်းတွေ့ရှိခဲ??
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် အမြင့်ပေ ၂ဝဝ ခန့်ရှိ ကျောက်ကမ်းပါးယံ ပြိုကျမှုကြောင့် ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေသူအမျိုး သားအလောင်း ၁၇ လောင်း ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ကိုးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ မေ ၄ ရက် နံနက် ၄ နာရီခွဲ ခန့်က ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့် မြို့နယ် ဆိပ်မူကျေးရွာအုပ်စု ဝှေခါ ကျေးရွာရှိ ……ကုမ္ပဏီ လုပ်ကွက်အတွင်း (ဒေသအခေါ် ကျင်းမောက်တောင်) အမြင့်ပေ ၂ဝဝ ခန့်ရှိ ကျောက်ကမ်းပါးယံ ပြိုကျမှုကြောင့် ထိုအချိန်တွင် အောက် ၌ ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေနေသူ များထံသို့ပြိုကျ၍ အမျိုးသား ၁၄ ဦး ၏ ရုပ်အလောင်းများကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ရှာ ဖွေမှုအရ အမျိုးသားအလောင်း သုံးလောင်းကိုထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးအထိ ရှိခဲ့ ကြောင်းနှင့် ကိုးဦးဒဏ်ရာရှိခဲ့ ကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ် မီးသတ် တပ်ဖွဲ့မှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးပြေငြိမ်း က အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ဦးစီးအရာရှိ ဦးပြေငြိမ်းက ”…….ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက်အ တွင်းမှာ ပြိုကျတာ။ အဲဒီမှာရေမဆေး ကျောက်ရှာသူတွေ ပိတ်မိတယ်။ ပြိုတာက နံနက် ၄ နာရီခွဲမှာ။ ၆ နာရီ ၄၅ မိနစ် လောက်မှာ သတင်းရတယ်။ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို သွားပြီးတော့ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး တွေလုပ်တယ်။ လောလောဆယ် သိရတာက သေဆုံးသူ ၁၇ ဦးရှိ တယ်။ ဒဏ်ရာရတာကိုးဦး။ ဆက် ပြီးတော့ရှာဖွေ နေခဲ့ပါတယ်။ ညနေ ၅နာရီမှာတော့ ရှာဖွေမှု ရပ်ဆိုင်းခဲ့ ပါတယ်”ဟု ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ မေ ၄ ရက်က ပြောသည်။ ”ပတ်ဝန်းကျင်အမြင်အရ တော့ သေဆုံးသူဦးရေ ၂ဝ ရှိနိုင် တယ်လို့ပြောတယ်။ လွတ်သွား လား မလွတ်သွားလားတော့ မသိ သေးဘူး။ သေဆုံးသူတွေက မြေပိ သေဆုံးခဲ့တာ။ ပြိုကျရတာကတော့ စွန့်ပစ်မြေစာပုံဆိုတော့ အဲဒီမှာ စက်ယန္တရားတွေနဲ့ တူးတယ်။ မိုင်း ခွဲပြီးတော့တူးတာတွေကြောင့် တုန် ခါမှုတွေနဲ့ ပြိုကျတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိတယ်။ မြေစာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ အောက်မှာ ကျောက်တွေရှိတယ်။ အဲဒီကျောက်ကိုသွားပြီးတော့မှ ရေ မဆေးတွေက အောက်ကနေရှာနေ တာပေါ့”ဟု ၎င်းကဆက်လက် ပြောသည်။
သေဆုံးသူနှင့် ဒဏ်ရာရသူ များကို ဖားကန့်မြို့နယ်ပြည်သူ့ ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း ဖားကန့်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအုပ်လွင် စိုးက ပြောသည်။ ”ပြိုတာက လုပ်ကွက်ထဲက ကျောက်ကမ်းပါးယံမှာပေါ့။ နံနက် ၄ နာရီကစပြီးတော့ ရေမဆေးသမား တွေကို စရှာခွင့်ပြုတယ်။ အဲဒီမှာ ရှာနေရင်းနဲ့အပေါ်က ကျောက် ကမ်းပါးပြိုကျပြီးတော့ ပိပြီးသေတဲ့သူကသေ၊ ထွက်ပြေးတဲ့သူက ဒဏ် ရာတွေရတာပေါ့။ အခင်းဖြစ်ချိန် တုန်းက ရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေ တဲ့သူတွေ ၄ဝ၊ ၅ဝ လောက်ရှိ တယ်လို့ အဲဒီမှာရှိတဲ့သူတွေက ပြောတယ်။ သူတို့က ဝှေခါရပ် ကွက် (၁)(၂)(၃)(၄) မှာနေတဲ့ သူတွေပဲ။ သေတဲ့သူနဲ့ ဒဏ်ရာရ သူတွေကအမျိုးသားတွေပဲ”ဟု ¤င်းကဆက်လက်ပြောသည်။
အဆိုပါသေဆုံးမှုများနှင့် ပတ် သက်ပြီး ဖားကန့်မြို့မရဲစခန်းတွင် သေမှုသေခင်းဖွင့်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ¤င်းကပြောသည်။ ဆိပ်မူသင်္ခါ လူမှုကူညီရေး အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ”အသင်းအဖွဲ့က လူ ၆ဝ လောက် က အခင်းဖြစ်နေရာသွားပြီးတော့ အလောင်းတွေ ရှာပေးခဲ့တယ်။ ရုပ် အလောင်းတွေကိုတော့ ဖားကန့် ဆေးရုံကို ပို့လိုက်ပါတယ်”ဟု ဒီမို ကရေစီတူဒေးသို့ မေ ၄ ရက်က ပြောသည်။
ဓာတ်အားလိုင်းပြင်ပ တစ်အိမ်သုံး ဆိုလာစနစ်နှင့် အသေးစား လျှပ်စစ်ဓာတ် အားပေးစနစ်ဖြင့် မီးလင်
ပြည်ပသို့ ရွှေ့ပြောင်း သွားလာရာတွင် ဆိုးကျိုးဖြစ်မှု လျော့နည်းစေရေး အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းပါ
မြဝတီမြို့ရှိ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ တစ်ကျောင်းရှိ အခန်းအချို့၌ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၈ဝ ကျော?